चन्द्रागिरी हिल्स र नेपाल हाइड्रोको शेयरमूल्य निरन्तर उच्च दरमा वृद्धि – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:३७ Basanta Khanal	0 Comments	sharemarket
फागुन २५, काठमाडौं । निरन्तर उच्च दरमा बढ्दै आएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य मंगलवार ९ दशमलव ९२ प्रतिशत बढेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दाको समय ११ : २० बजेसम्ममा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६६ ले बढेर रू. ७३१ पुगेको हो ।
त्यस्तै आइतवार १५ दशमलव ७९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेडको शेयरमूल्य मंगलवार पनि ९ दशमलव ८८ प्रतिशत बढेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर रू. ३२ ले शेयरमूल्य बढेर रू. ३५६ पुगेको हो । यसदिन दुबै कम्पनीको शेयर खरीद चाप उच्च रहेको छ ।
← झरना थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्म ए मेरो हजुर ४ प्रदर्शन हुँदै
मंगलबार शेयर बजार रातो हुँदा , बेच्ने भन्दा किन्ने तीन गुणा बढी →